Ma waxaad tahay naqshadeeye ka fiican kan qaaliga ah ee aad soo dallacdo? | Abuurista khadka tooska ah
Dunida naqshadeynta, sida meelo badan, waxay ku raaxeeysataa jimicsiga gaarka ah, taasi waa, taasi qofku kaligiis wuu shaqeyn karaa, helitaanka macaashka guud iyada oo aan loo baahnayn in laga jawaabo tiro ama shirkad marka laga hadlayo joogitaanka, xisaabaadka iyo xeerarka gudaha. Jimicsi gaar ah wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh oo waxyeello leh, laakiin marka la soo koobo, waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah siyaabaha badan ee jimicsiga loo sameeyo meel cayiman oo aqoon ah.
Naqshadeeye muuqaal ah waa qof mas'uul ka ah sameynta moodellada, noocyada, tirooyinka, wax ka beddelka sawirrada, iwm Waa shaqsi ku takhasusay farsamaynta iyo hagaajinta sawirka. Shaqooyinkaagu way awoodaan lagu arki karaa wax soo saar kasta oo summad lehAma cunno, shey nadaafadeed ama xitaa dhar, iyo sidaas darteed, shay kasta oo kale oo leh sumad.
1 Immisa ayey tahay inuu naqshadeeye garaafku lacag ka qaado?
2 Ma waxaad tahay naqshadeeye ka fiican kan qaaliga ah ee aad soo dallacdo?
Immisa ayey tahay inuu naqshadeeye garaafku lacag ka qaado?
Sidaa darteed, bilowga jimicsiga gaarka ah, qaar ka mid ah xaddidaadaha caadiga ah ayaa laga yaabaa inay muuqdaan: Macaamiil la’aan iyo aqoon la’aanta sicirka la xiriira shaqadeenna waana sababta oo ah xaddidan, naqshadeeyayaasha, sida qof kasta oo kale, ayaa go'aansada in lala macaamilo iyada oo loo marayo Qiimaynta qiimo aad u jaban, iyagoo aaminsan in tani ay damaanad qaadi doonto ugu yaraan tiro macmiil ah. Tani ma saxbaa? Runtii ma dhaqanka ugu fiican baa?
Dabcan, qiimaha hooseeya wuxuu noqon doonaa barbaro weyn macaamiisha tanina waxay noqon kartaa xaalad kasta oo aqoon ah. Laakiin si kastaba ha noqotee, maxaa dhici doona markaan tixgalino inay lagama maarmaan u tahay kor u qaadista qiimaheena? ¿Tirada macaamiisha ayaa isku mid noqon doonta?
Waxaan ogaan doonaa in macaamiisheenna badankood ay maciinsadeen adeegayaga qiimaheena mana ahan shaqadeena lafteeda taasna waxay inaga dhigi kartaa inaan kudhaxno kala duwanaansho waxyeelo leh xitaa heer maskaxeed, maadaama aan ogaanay in shaqadeena (xumaan iyo samaanba) aan waligood si dhab ah loo qiimeyn doonin.
Dhibaatooyin ayaa ka dhex jira layliga naqshad gaar ah (iyo sidoo kale meelo badan oo kale oo si gaar ah loogu dhaqmo) kuwan dhexdooda, maqaalka maanta wuxuu ka hadlayaa dooda soo socota:
Ma waxaad tahay naqshadeeye ka fiican kan qaaliga ah ee aad soo dallacdo?
Jawaabtu way fududaan kartaa oo marka hore mid baa oran kara tayada shaqadu sinaba uguma xirnaayso qiimaha isku mid ah ama leh waxtarka naqshadeeyaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la maro su'aashan dhowr jeer, oo ka tarjumeysa jawaabteena, maadaama, runti, intee in le'eg tahay shaqadeena? Ma jiraa farqi u dhexeeya qiimaha shaqadeennu u qalanto iyo waxa aan u malayno inay ku kacayso?
Mid ka mid ah siyaabo badan oo caadi ah oo talo looga helo qiimaha badeecada ama adeeggu uu la tashanayo suuqa guud ahaan, kormeerida iyo falanqaynta habdhaqanka qiimaha badeecadaas. Waana taas runtii, waa hab si ballaaran loo adeegsado, marka loo eego in qof kastaa uusan mabda 'ahaan lahayn aqoonta saxda ah ee suuqooda.
Marka xigta, xaqiiqdii waa lama huraan "Caan qaado oo seexo”. Haa, inaad caan noqotid oo aad seexato wax kale ma ahan oo keliya inaad shaqo fiican qabato adigoo ku beddelaya qiimo wanaagsan (mid raqiis ah ama qaali ah midna), si fudud qiimo caddaalad ah sida ku xusan shaqadeenna. Soo jeedinta lafteedu waxay dooneysaa in lagu yaqaan shaqo wanaagsan, maxaa yeelay, ugu dambeyn, dadka kuma dhibidoono bixinta shaqo fiican, iyadoo la tixgelinayo in mararka qaarkood “Qiimaha jaban ayaa qaali noqon kara".
Waxay ku saabsan tahay markaa tixgeli dhinacyo badanMaadaama laga yaabo inaad u baahato inaad isweydiiso su'aalahan kahor intaadan qiime dhigan:
Qodobka koowaad ma aha wax ka badan iyo wax ka yar go'aamiso sida ay shaqada u murugsan tahay taas ayaa lagu aaminay oo tanina waa inay noqotaa sida ugu macquulsan uguna macquulsan, iyadoon loo eegin sida ay u adagtahay iyo inaysan aheyn, maxaa yeelay waxaan u imaan karnaa inaan ka fikirno in shaqo cayiman ay ka qiimo yar tahay maxaa yeelay waxaan horey u ogaanay sida loo sameeyo, tanina waa hubaal dhaqan xun.
Qodobka labaad, degdega macmiilka. Waxay ka kooban tahay aragtida sida degdegga ah (marka loo eego taariikhda) shaqadu u tahay macmiilka, tanina waxay sidoo kale tixgelinaysaa helitaankeenna iyo waqtigeenna. Shaqo laga bilaabo maanta ilaa berri waa inay xoogaa qaali noqotaa ka badan shaqo maanta usbuuca soo socda, maadaama macmiilku uusan tixgelinaynin helitaankeena.
Ugu dambeyntii, qodobka saddexaad waa arrin fudud in la arko illaa heerka macmiilku noo tixgelinayo inaan karti u leenahay shaqada, Anagoo ku qanacsan aragtidayada iyo talobixintayada inta lagu guda jiro dooda qaab dhismeedka shaqada. Waa, markaa, tilmaamo taxane ah oo ay tahay inaan tixgelinno si aan u galno adduunka jimicsiga gaarka ah ee naqshad sawireed iyo waliba qayb kasta oo aqoon ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Ma tahay naqshadeeye ka fiican inta qaaliga ah ee aad soo dalacdo?
Tani waa wax aan su'aalaha ku sii hayo: Immisa ayaa laga qaadaa shaqadayda?
Waxaa jira dhinacyo badan oo la tixgelinayo marka qiimo la saarayo shaqadayda waana wax ku kala duwan shaqada ilaa shaqada. Wax aad si fiican ugu sharaxday dhawr eray.
Waqtigan xaadirka ah wax badan ayaan ka qabtaa arintaan mana muujiyo xirfad ahaanta ay tahay inaan sameeyo maxaa yeelay ma aqaano sida loo qiimeeyo (illaa inta macquul ah) shaqadayda waxaanan ka dhigayaa mid aad uga jaban.
Horaan u idhi maan rabin in aan naqshadeeye noqdo.
Ku jawaab joksansuriel
Ma jiraa liis qiimeyn ah oo naqshadeynta ku dhex jira mise qof walbaa lacag buu ka qaataa wuxuu tixgeliyo?
Jawaab Julio Cesar MO
Muhiimadda farshaxanka Pop ee naqshadeynta garaafka